नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपालमा भएका केही नेपालीहरु बिदेश गएका नेपालीहरु सँग किन यति बिघ्न जल्छन, डाह र इर्श्या गर्छन् ? बिकास शर्माले तयार गरेको यो भिडियो एक पटक अबस्य हेर्नुहोला ।
नेपालमा भएका केही नेपालीहरु बिदेश गएका नेपालीहरु सँग किन यति बिघ्न जल्छन, डाह र इर्श्या गर्छन् ? बिकास शर्माले तयार गरेको यो भिडियो एक पटक अबस्य हेर्नुहोला ।
भिसा नपाउने र नसक्नेहरुको रोदन होइन र यो ??
Posted by www.Nepalmother.com at 3:33 PM